Umhombiso - iShanghai Comi Aroma Co., Ltd.
Enye into ebalulekileyo ekufezekiseni inkangeleko yakho oyifunayo yindlela yokupakisha kwakho kugqityiwe.
Sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo, kubandakanya umbala ongaphakathi, ukungunda, ngaphakathi kunye nangaphandle, isinyithi, kunye nokutshiza kugqitywe njengeeperile, matte, touch ethambileyo, ecwebezelayo, kunye nefriji.
Inaliti yokubumba yinkqubo yokuvelisa iindawo ngokufaka inaliti eshushu kunye nezinto ezixubileyo, ezinjengeglasi kunye neeplastikhi, ekubunjweni apho iphola kwaye iqine kuqwalaselo lomngxuma. Eli lixesha elifanelekileyo lokuba umbala wakho owuthandayo ube yinxalenye yemathiriyeli uqobo lwayo, endaweni yokongezwa kamva.
UKUTSHAYA KWANGAPHAKATHI / KWANGAPHANDLE
Ukutshiza ukutshiza isitya kunika amandla okwenza umbala owenziwe ngokwezifiso, ukuyila, ukuthungwa, okanye konke-kwiglasi okanye kwiplastiki. Njengoko igama lisitsho, kule nkqubo izikhongozeli ziyafafazwa ukuze kufikelelwe kwisiphumo esifunekayo-ukusuka kwimbonakalo yeqabaka, ukuziva okubumbileyo, umbala ongasemva wesiko elinye ekugqibezeleni uyilo, okanye nakweyiphi na indibaniselwano yoyilo enokubakho enemibala emininzi, iyaphela okanye ithambeka.
Obu buchule buphinda ukujonga okucocekileyo chrome kwizikhongozeli. Inkqubo ibandakanya ukufudumeza izinto zentsimbi kwigumbi lokucoca de liqale ukuphuma ngumphunga. Isinyithi esenziwe ngomphunga siyadibana kwaye sibophelela kwisikhongozeli, esijikeleziswayo ukunceda ukuqinisekisa ukusetyenziswa okufanayo. Emva kokuba inkqubo yentsimbi igqityiwe, i-topcoat yokukhusela ifakwe kwisikhongozeli.
Ukubhalwa kwembonakalo kwenza umfanekiso ophakanyisiweyo kunye nokulahla izinto ezilahlwayo kudala umfanekiso ongaphezulu. Obu buchule bongeza ixabiso lokubeka uphawu kwiphakheji ngokwenza uyilo lwe logo eyahlukileyo abathengi abanokuyichukumisa kwaye bazive.
Obu buchule bokuhombisa yenye indlela yokusebenzisa ikhusi lesilika. I-inki igqithiselwa kwinxalenye ngoxinzelelo kunye ne-silicone roller eshushu okanye ife. Kwimibala emininzi okanye iilebheli ezineetoni, kunokusetyenziswa iilebheli zokudlulisa ubushushu eziya kuthi zibonelele ngomgangatho wemibala, ubhaliso kunye namaxabiso okhuphiswano.
Imizobo ye-Hydro, ekwabizwa ngokuba kukuprinta ukuntywilisela, ukuhambisa amanzi, ukuhambisa amanzi, ukuntywila ngamanzi okanye ukuprinta ii-cubic, yindlela yokusebenzisa uyilo oluprintiweyo kumacala amathathu-ntathu. Inkqubo ye-hydrographic ingasetyenziselwa isinyithi, iplastiki, iglasi, imithi ekhuni kunye nezinye izinto ezahlukeneyo.
Kwizinto zokuthambisa, zobuhle, kunye neshishini lokhathalelo lomntu, ukupakisha kukwa malunga nefashoni. Ukutyabeka okutyibilikayo kudlala indima ebalulekileyo ekwenzeni ipakeji yakho yokuma kwiishelufa zentengiso.
Nokuba kungumbala weqabaka okanye umphezulu ocwebezelayo, ukutyabeka kunika iphakheji inkangeleko ethile enomtsalane.
IHOTI / UKUTSHINTSHWA KWEFOYILI
Ukunyathela okushushu yinkqubo apho ifoyile enemibala isetyenziswa kumphezulu ngokudibanisa ubushushu noxinzelelo. Ukunyathela okushushu kuvelisa ukubonakala okuqaqambileyo kunye nobunewunewu kwiityhubhu zokuthambisa, iibhotile, iingqayi nokunye ukuvalwa. Imibala efakiweyo ihlala igolide nesilivere, kodwa i-aluminium ebrashi kunye nemibala e-opaque ikwakhona, ilungele uyilo lokusayina.